Akwụkwọ akụkọ ejije kacha mma
Nyocha akụkọ dị egwu
Ide ihe banyere ịhụnanya nwere n'Aki Shimazaki ihe pụrụ iche, na-egbuke egbuke adị adị nke sitere na ihe efu nke obi mgbawa ruo na mmiri na-adịghị agwụ agwụ nke ịhụnanya ịhụnanya. Mmiri nke na-asọba n'otu n'otu na nke na-akpọte otu mmetụta ahụ site n'ebe ọ bụla ozugbo a kwụsịrị mmanya ikpeazụ. N'ime…
"Onye dike bụ onye ọ bụla nke na-eme ihe ọ nwere ike ime," Romain Roilland kwusiri na amamihe niile dị n'ụwa na-arụtụ aka. Ma ọ dị ntakịrị ihe anyị chere na nwatakịrị nwere ike ime iji nwetaghachi nwata ya. N'ihi na ịnwụ nwa bụ ihe na-ekwekọghị n'okike mgbe nne ma ọ bụ nna nwụnahụrụ ...
Ike nke nkịta, nke Thomas Savage
A akụkọ banyere Thomas Savage mụrụ na 1967 na ugbu a na-abịakwute anyị na na iju virulence nke kasị na-atụghị anya ala ọma jijiji. N'oge gara aga, ọ nwere ike ịdị ka akụkọ ihe mere eme nke United States miri emi, taa a na-achọpụtaghachi ya dị ka akụkọ mmekọrịta siri ike, opekempe site na mmalite, na-abanye n'echiche ahụ nke ihe ...
Ezumike nke abalị, nke Marieke Lucas Rijneveld dere
Ihe kacha njọ bụ ihe na -eme n'oge. Enweghị oge dị mma maka ịdị mma n'oge. Na agbanyeghị nke a, ihe kacha njọ na -eme, na cadence ahụ enweghị ike ịkọwa ya n'echiche mmadụ n'agbanyeghị ịgbalị ijikọ ya na ụdị ọnwụ na -ebute ụgwọ ọrụ ma ọ bụ ...
Trace of Silence, nke John Boyne dere
Ihe ọdịnihu nke onye edemede ọ bụla kwesịrị ịbụ ide ọrụ ya kacha mma obere oge tupu ọ pụọ na ogbo, ma ọ bụ site na ịpụ na ụwa akwụkwọ ma ọ bụ ọnwụ. Ọ dị njọ mana ọ bụ eziokwu. N'ihi na mgbe e mesịrị anyị na -ahụ okwu dịka John Boyne, enweghị ike ịrị elu n'elu nwa ya ...
Nne Frankstein, sitere na Almudena Grandes
Ana m achọta mgbe niile usoro mmụta nke okwu hysteria na -achọ ịmata. N'ihi na o si n'afọ nne ya n'asụsụ Grik. Ọ na -adịkwa mfe na -eso njikọ dị mfe na nke na -asọ oyi nke nwanyị na onye ara site na okike. Aberrant. Almudena Grandes N'ime akwụkwọ akụkọ a ka edobere n'otu onye isi mgbaka nwanyị dị na ...